Ukuhweba Robot • Gold, Amafutha, Forex & Crypto • Ukuhlolwa & Ukubuyekeza
Amabhothi okuhweba nama-Cryptobots
Imodeli yebhizinisi yezinkampani zokuhweba inikeza abatshalizimali ithuba lokubamba iqhaza ezimakethe zezimali zezimali, izimpahla, izinsimbi eziyigugu kanye ne-cryptocurrensets. Ngamarobhothi wokuhweba onikezwayo, awudingi ulwazi noma amakhono kwezezimali noma ukuthuthukiswa kwe-IT. Ngakho-ke ake ama-algorithm wokuhweba anakekele inhlokodolobha yakho ngokukhalipha nangokucophelela, sibakhethele lokho.
Ngomusa, ngizokuqondisa futhi ngiphendule imibuzo yakho, kodwa khumbula ukuthi ubungozi bokulahlekelwa bubaluleke kakhulu njengezinzuzo eziqoqiwe. Tshala kuphela inani ozimisele ukukulahlekela. Qala futhi uhlole amarobhothi ahlongozwayo ngemali encane yokuqala ukuze uqonde isu lawo.
Ulwazi oluncane oludingekayo
Khiqiza imali engenayo ezenzakalelayo ngokutshala ngokuhlakanipha.
Cishe akukho okumele ukwenze!
Bhalisa, faka imali yakho bese uvumela amarobhothi akuhwebe.
Qoqa umholo wakho njalo nazo zonke izimali zakho ngaso sonke isikhathi.
Amarobhothi okuhweba namathuba ezezimali
Amarobhothi okuhweba ahlolwe izinyanga ezimbalwa, athembekile futhi asebenza kahle
Njengoba ukuhweba kuyekile ukuba yilungelo lochwepheshe, amarobhothi okuhweba ahlasele i-inthanethi futhi angakwazi ukukhiqiza izinzuzo zezezimali kubantu ngabanye. Lawa marobhothi asedume ngokuhweba ngokuzenzakalela, egameni labasebenzisi bawo, okuwonga isikhathi esibalulekile. Njengoba kunemikhonyovu eminingi ngale ndaba, siyahlola, sihlaziye futhi seluleke amanye ama-bot okuhweba ngaphezu kwamanye.
Idizayinelwe ukudayisa i-XAU / USD pair ngolawulo oluncane lwengozi kanye neqhinga lesikhashana lesiklip. Scalping anikezelwe emakethe yegolide.
I-AutoTrade Crypto - ATC
Idizayinelwe ukuhwebelana ngemakethe ye-cryptocurrency futhi ikakhulukazi i-Bitecoin BTC enemakethe eguquguqukayo ephezulu kakhulu.
✅ I-Autotrade Crypto
I-AutoTrade Forex yimarobhothi yokuhweba esekelwe emakethe yase-Indonesia. I-Autotrade Forex izotholakala ehlobo lika-2021.
Yenzelwe ukuhweba imakethe kawoyela. I-Autotrade Oil izohlose ukubheja phezulu noma phansi kuya ngenani lomgqomo wamafutha.
I-Fin 888 iyirobhothi lokuhweba lase-Indonesia elisekelwe ekuhwebeni kwe-fiat currency. I-Fin888 yayiyirobhothi elizinzile kodwa ingasebenzi kahle kuneAutotrade Gold.
I-ecosystem yamarobhothi angu-18 kuhlanganise nama-2 ku-crypto axhunywe ku-API Binance. Amanye ama-bot azoxhunywa ku- broker i-Equiti elawulwayo.
Idizayinelwe ukudayisa ipheya ye-EUR/USD, indlela eyinhloko yokusebenza ye SmartXBot kusekelwe enkambisweni nasekuhwebeni kwezikhundla ezimfushane. Isebenza kahle kakhulu kune-ATG.
Kucoin Amarobhothi e-Crypto
Okunye ukuhwebelana okuhle kakhulu kunikeza amasu amarobhothi ama-4 ngokuya ngamapheya emali afiselekayo.
Uhlelo lokuthenga igolide namadayimane ngokukhokha ngemali ye-Fiat, ukudlulisa noma i-crypto.
Irobhothi lokuhweba lase-Indonesia lithengisa imakethe yegolide. Uhlelo lokwabelana ngenzuzo njenge Smartxbot.
Irobhothi lokuhweba lase-Indonesia lihweba ngemakethe ye-crypto e broker I-Lotus International.
I-robot yokuhweba esekelwe emakethe ye-Forex.
Idizayinelwe ukuhweba ngababili be-EUR / USD, i-Coved ingenye yesoftware enhle kakhulu ehlangene nobuhlakani bokufakelwa kanye nobunye bobuchwepheshe bokulawulwa kwezinhlekelele.
Idizayinelwe ukuhweba ngababili be-EUR / USD ngokuphathwa kwezinhlekelele eziphansi kanye necebo lesikhashana lesikali.
❌ Ithiphu ye-Crushtip
Idizayinelwe ukuhweba ngazimbili zemali ngambili, i-Elitrob ihlaziya ngokuqhubekayo imakethe ye-Forex, ifuna amazinga asemqoka esikhungo nezindawo ezinamathuba aphezulu okuhweba.
Idizayinelwe ukuhweba ngazimbili zezimali kanye ne-crypto ngaphansi kwesu lokuhwebelana nelokuhweba ngosuku.
Uhlelo lokubuyisa imali olususelwa ekukhangiseni.
Marketing AI Marketing
Thola amarobhothi ama-3 agxile ekuhwebeni nge-scalping nasekuhwebeni kosuku okuqondiswa abadayisi abangochwepheshe abangu-12 nokuhweba ngezimali eziyinhloko.
Ukuthuthukiswa kanye Nokuqapha amarobhothi athile okuhweba
Sihlola ezinye amarobhothi okuhweba kanti ezinye azibonakali kithi zithembekile futhi zisimeme ngokuhamba kwesikhathi. Nalu uhlu olungaphelele lwamarobhothi okuhweba esiwalandela eduze: Smart Evo, Maestrem, GoldImayini, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Gwema lawa marobhothi okuhweba (Imikhonyovu / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Ngisho nabathengisi abahamba phambili bathembela kumarobhothi ukuze baqale ama-oda abo ezimakethe.
Ziyashesha, zibala ngokushesha, futhi azinayo imizwa.
Amarobhothi wokuhweba azenzakalelayo amasistimu azenzakalelayo asebenza ngokuya ngamapharamitha noma amashejuli asethwe amaqembu abo abadayisi. Lapho selixhunywe kwi-akhawunti yakho yokuhweba, irobhothi lizothatha isikhundla ezimakethe zezezimali ngaphandle kokungenelela komuntu, okususa amaphutha adalwa yimizwa yabantu.
Lawa ma-software aklanywe ngenhloso yokwenza inqubo yokuhweba isebenze futhi kutholakale inzuzo enhle, ngenani elihle lobungozi / lokubuya. Lawa ma-algorithms athuthukile ahlanganiswe nobuhlakani bokufakelwa ahlaziya njalo imakethe, evula ngokuzenzakalela futhi avale ukuhweba ngokuphathwa okuhle kwesikhwama (ukwehla okuphezulu kwe-3%), kusetshenziswa imiyalelo esuselwa kwizinkomba zemakethe zezibalo, zezibalo kanye nezithile. umnikazi wezifundo.
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, njenge-Meta Capital ithuthukise ubudlelwano obuningana nochwepheshe abahlukene emkhakheni wokuhweba okuzenzakalelayo.
Irobhothi ngalinye linesu lalo lokuhweba kuye ngemakethe eqondiwe. Zihlala zigadwa, zivuselelwa ngokwezindaba zezomnotho futhi zenziwa ithimba labadayisi abangochwepheshe.
Le nqubo yokuthuthukisa eqhubekayo ibalulekile ukuze kuqinisekiswe imiphumela yesikhathi eside eyimpumelelo. Imakethe ye-Forex iyindawo emanzi kakhulu futhi eshintsha njalo. Leli zinga lokuthuthukisa liqinisekisa ukuthi ama-algorithms ahlala phezulu futhi yonke into isebenza njengoba kufanele.
"Uma umusha emhlabeni wamarobhothi wokuhweba, thatha iseluleko sami: ukubheja imali ongayidingi, vumela umhwebi abese eqoqa ama-winnings akho uze uthole ukubheja kwakho kokuqala. Ngemuva kwalokho, kuphela Ibhonasi. "
Isu lomuntu siqu lezezimali
Sebenzisa i- Combo
I-Robot / Crypto / Ukugcwala.
Nali elinye lamasu okutshala imali okukhiqiza imali engenayo ngenkathi uhlukanisa okuningi ngangokunokwenzeka:
Sebenzisa irobhothi elilodwa noma amaningi ngokuhweba ngemali brokerngokulandelana.
Ngokuzuza okukhiqiziwe, thenga ama-cryptocurrensets ekushintshaneni okuyinhloko (Binance, Coinbase noma Crypto.com).
Thengisa noma ubambe eyakho cryptomonnaies ukuze ukhiqize inzalo yanyanga zonke kanye / noma uthenge imikhiqizo yansuku zonke nezinsizakalo nge-crypto yakho njenge Binance Card ukuthenga ukudla, ukulungisa izinwele, uphethiloli, ukubhalisa nokungcebeleka ...
Amarobhothi wokuhweba azinzile futhi asebenzayo
Gcina futhi uhlukanise
Funda kabanzi ngokuhweba amarobhothi
Imibuzo / izimpendulo ezi-4
Kungani uhlukanisa utshalomali lwakho ngerobhothi lokuhweba?
Ukutshala imali kurobhothi lokuhweba kuyindlela ethandwa ngokwengeziwe engakhombisa ukuthi inenzuzo enkulu. Ngakho-ke, ukuhweba okuvama kakhulu kwenza cishe uhhafu wama-oda abekwe eFrance kanye nama-70% ama-oda abekwe e-USA. Lezi zibalo zikhombisa ngokusobala ukusebenza kwalolu hlobo lokutshalwa kwezimali.
Izinzuzo eziningana kufanele zaziwe ngamarobhothi okuhweba:
- okokuqala, benza kube nokwenzeka ukukhiqiza inani elingcono lempahla, amanani avumelana ngokuqhubekayo nesidingo semakethe,
- imakethe iba uketshezi oluningi, kube lula ukuthenga nokuthengisa
- banciphisa izindleko zokuhweba zombili izinkampani nabantu ngabanye
Yiziphi izinhlobo zabantu ezinentshisekelo kakhulu ekuthengiseni amarobhothi namuhla?
Namuhla, kunezinhlobo ezimbalwa zabatshalizimali abayingozi abasebenzisa amarobhothi okuhweba okuzenzakalelayo:
Abantu abafuna ukuhlukanisa imithombo yabo yemali engenayo
Abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna ukuhlanganyela ekuhwebeni ukuze benze imali eyengeziwe. Amarobhothi okuhweba ayindlela enhle kakhulu kulokhu ngoba akuvumela ukuthi utshale imali ezimakethe zezezimali ngaphandle kokuba namakhono amaningi njengabadayisi abaqeqeshiwe.
Sithola inani elikhulayo labathengisi abasebenzisa amarobhothi okuhweba, njengoba kunjalo ngamarobhothi engikunikeza wona kuwebhusayithi yamanje. Ngempela, ukuhweba okuzenzakalelayo kudinga umsebenzi omncane ngenkathi uvumela ukukhiqiza imali engenayo. Abahwebi basacophelela ukukhetha amarobhothi wokuhweba asezingeni eliphakeme anikezela amasiginali anenzuzo futhi acabangayo.
Izikhathi ezijwayelekile zokutshalwa kwezimali
Abatshalizimali bahlala bebheke amathuba okuhlukahluka kwemali yabo. Amarobhothi okuhweba ayindlela eheha kakhulu lolu hlobo lwephrofayili. Ngempela, lapho laba batshalizimali bethola amarobhothi amahle, abanqikazi ukutshala imali eningi.
Kungani nginikela usizo lwami mahhala?
Inhloso yami ukukuxhasa ekubhaliseni amarobhothi alethwe. Ngengosi yami, ngikukhombisa kuphela amarobhothi wokuhweba engiwahlaziye amasonto amaningi, amaningi. Vele, kuhlale kunengozi ngoba, masikhumbule, irobhothi ngalinye lokuhweba lihlala liyi-investimenti eyingozi ngakho-ke lingenza ukulahleka.
Ngikunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuze uqalise ngokuhweba okuzenzakalelayo, ekubonakaleni okuphelele. Umgomo ukuthi wazi kahle ukuthi ungena kuphi ngaphandle kwezimanga ezingemnandi lapho ufika.
Kukho konke ukuphila kwami, bengilokhu ngizimisele ukuhlanganyela ukuze ngivumele labo abangizungezile bathuthuke. Kufana ncamashi nesayithi Robots-Trading.fr. Iqiniso elilula lokwazi ukuthi ngibamba iqhaza ekwakhiweni kwephrojekthi yakho lingenelisa ngempela.
Ukuhweba kanye ne-cryptocurrencies sekuye kwaba uthando lwangempela kusukela ngo-2017. Ngichithe amahora amaningi ngihlaziya lezi zimakethe ezintsha kanye nemithombo emisha yokutshalwa kwezimali okuvela kuzo. Manje, inhloso yami ukwabelana nawe ngalolu thando ukuze ulujabulele.
Ama-bots wokuhweba ahlukene atholakala manje ezimakethe
Namuhla kunezinhlobo eziningana zamarobhothi okuhweba. Iphrofayili yalawa marobhothi iyahlukahluka ngokuya ngentuthuko yemakethe. Ngakho-ke, ezinye izimakethe azizinzile kanti ezinye zizoba nemikhuba evelele, ukuguquguquka okukhulu.
Amarobhothi okuhweba angathathi hlangothi
Amarobhothi okuhweba ohlobo oluhlukene agxila kakhulu ezimakethe ezinzile futhi ezingaguquguquki kakhulu. Lawa marobhothi okuhweba ancike kunkomba yezobuchwepheshe (uchungechunge lwamaphoyinti oluvumela ukuhlaziya izibambiso zemakethe yamasheya ukuze kubikezelwe indlela izintengo ezizovela ngayo). Irobhothi lokuhweba lohlobo lwe-Range lizohlola lezi zinkomba zobuchwepheshe ngokuqhubekayo futhi lenze izenzo zokuthenga nokudayisa lapho imakethe ithengwa kakhulu noma ithengiswa ngokweqile.
Amarobhothi wokuhweba ngokulandela okulandelayo
Lolu hlobo lwerobhothi lokuhweba lizoqinisekisa ukubona ukuthambekela okukhishwa emakethe ngokuvula izikhundla ezilandela inkambiso ephezulu yalokho. Ngakho-ke, isikhathi ngasinye lapho irobhothi lithola umkhuba ongaba yinzuzo, lizovula noma livale izikhundla. Qaphela ukuthi kuthatha kuphela amasiginali we-akhawunti angahambisani nomkhuba.
Amarobhothi Okuhweba Ngokuvamile (THF)
Bangamarobhothi okuhweba ancintisana kakhulu. Zenziwe kakhulu yizikhungo zezezimali. Bayakwazi ukwenza ama-oda ngemizuzwana embalwa nje (ukuklwebheka). Inhloso yokuhweba kwemvamisa ephezulu ukuxhaphaza ukuguquguquka okuncane okujwayelekile.